बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान सफल
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकमा बाख्रामा पनि कृत्रिम गर्भाधान सफल देखिएको छ । कृत्रिम गर्भाधान गरिएकामध्ये करिब ६० प्रतिशतमा सफल भएको पाइएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका पशु चिकित्सक मणि सापकोटाले जानकारी दिए ।
प्रजननमा विकृत अवस्था पनि आउनसक्ने र यसका धेरै कारण हुनसक्ने उनि बताउछन् । उनका अनुसार जिल्लाको कोशीपारि क्षेत्रका विभिन्न स्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर सापिङमा बाख्राको कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापना गरिएको र त्यहाँबाट धेरै बाख्रापालक कृषकले कृत्रिम गर्भाधानको सुविधा लिएका छन् ।
कोशीपारिको कात्तिके देउराली, माझिफेदा, पोखरीचौरी, सापिङलगायतका क्षेत्र बाख्रापालनका लागि पकेटक्षेत्र मानिन्छ । कृत्रिम गर्भाधान सफल देखिएपछि जिल्लामा पछिल्लो समय बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान गर्नेको बढ्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा १५७ बाख्रामा र आव २०७३÷७४ मा ८२८ बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान गरिएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, धुलिखेलले जनाएको छ । जिल्लामा कुल बाख्राको संख्या लाख एक हजार ८८२ रहेको छ ।
त्यस्तै गाईभैँसीमा पनि कृत्रिम गर्भाधानप्रतिको आर्कषण बढ्दो छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा २० हजार २५६ र आव २०७२÷७३ मा २६ हजार १३० गाईमा कृत्रिम गर्भाधान गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा दुई हजार ९७४ र आव २०७२÷७३ मा तीन हजार ८७२ भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा २५ हजार ५०१ गाईमा कृत्रिम गर्भाधान भएको छ भने पाँच हजार १०३ भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान भएको छ । जिल्लामा गाईको संख्या एक लाख ४४ हजार ३८९ र भँैसीको संख्या एक लाख ३५ हजार २५६ रहेको छ ।
काठमाडौंमै भेटियो बर्डफ्लु
चितवनका विभिन्न स्थानका कुखुरामा बर्डफ्लु फेला परेलगत्तै काठमाडौंका हाँसमा पनि बर्डफ्लु फेला परेको छ। काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालि ...
बिहे गरेको १५ मिनेटमै सम्बन्धबिच्छेद !
दुबईमा एक जोडीले बिहेको १५ मिनेटमै सम्बन्धबिच्छेद गरेका छन् । ‘गल्फ न्यूज’ अखबारका अनुसार शरिया न्यायालयमा विवाह गरेको १५ मिनेटमै ...
हलिउडका प्रख्यात अभिनेता हार्भे वेन्सटेनले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण
हलिउडका प्रख्यात अभिनेता हार्भे वेन्सटेनले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन् । उनलाई अभिनेत्री लुसिया इभान्सले बलात्कारको आरोप लग ...
यस्तो सहर जहाँ भाडामा प्रेमिका पाइन्छ
चीनको एक सहरमा एक्लोपन महसुस गर्दै आएका युवालाई ध्यानमा राखेर भाडामा प्रेमिकाको व्यवस्था गरिएको छ । गुआङ्गडोङ्ग प्राप्तको ह्युआन ...
हाइब्रिड खानाले पुर्‍याउने असर
काठमाडौं- यो संसार प्रकृतिको देन हो र प्राकृतिक नियमसंगत चल्छ । खाद्यवस्तु पनि प्रकृतिले मानव समुदायलाई दिएको उपहार हो । यसमा सबै ...
क्यान्सरको जोखिम घटाउने ७ खानेकुरा
काठमाडौं- दूषित पर्यावरण र खानपानलगायत कारणले क्यान्सर रोगीको संख्या बढ्न थालेको छ । क्यान्सरको जोखिम कम गर्न के खानुपर्छ ? ब्रोक ...
हेर्छु मायाको झलक तिमीमा छ कि छैन
हेर्छु मायाको झलक तिमीमा छ कि छैन जस्तो घरको खुसि आगनीमा छ कि छैन पुगिएछ हेर्दाहेर्दै पिरतिको गहिराई सम्म बुझ्नु नै छ गहिराई ...
बा! तिमी महान् छौ
बा! तिमी महान् छौ " सपना पूरा गर्नका लागि तिमी आँखा खोल्छौ, म सपनै देख्नका लागि आँखा बन्द गर्छु । तिम्रो बन्द आँखामा त्रिक ...
नारायणगोपालको २७ औँ स्मृति दिवस
स्वर सम्राट नारायणगोपाल गुरुवाचार्यको २७ औँ स्मृति दिवसको उपलक्षमा नारायण गोपाल संगीत कोषले यहाँ आज सांगीतिक कार्यक्रमको आयोजना ग ...